Global Voices teny Malagasy » Fiji: noraofin’ny polisy ny solosaina findain’ny ahiahiana ho mpamaham-bolongana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Mey 2009 11:37 GMT 1	 · Mpanoratra Michael Hartsell Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Fiji, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Hafanàm-po nomerika, Teknolojia
Notazonin'ny  polisy ao Fiji ny mpisolovava telo ao an-toerana ary noraofiny ihany koa ny solosaina findain'izy ireo, satria heverina fa manana fifandraisana amina bolongana manohitra ny governemanta izy ireo.
Nanaiky  ny polisy fa notazonina izy telo mirahalahy, saingy tsy nolazaina kosa ny antony. Mitohy ny fahadihadiana. Na izany aza dia nanambara  ny Filohan'ny Holafitry ny Mpisolovava Fijiana, Dorsami Naidu, fa noho izy ireo heverina ho manam-pifandraisana amin'i Raw Fiji News, bolongan'olona tsy fantatra anarana ary henjana dia henjana amin'ny fitsikerana ny fitondra-miaramila tarihin'i Frank Bainimarama no antony nisamborana azy ireo.
Notaterin'ny  Impunity Watch fa tsy nahita porofo manamarika ireto mpahay lalàna telo ireto ho mamaham-bolongana ny polisy; na izany aza dia ahiahian'izy ireo fa mety ho filazalazana mombamomba ny mpanjifany tsy tokony hivoaka ampahibemaso no tena karohin'ny mpitondra. Mpiara-miasa ao amina orinasam-pisoloambava malaza any Fiji i Naidu sy i Apted ary efa nisolo vava ny gazety the Fiji Times tany amin'ny fitsarana. Fa ihany koa no mpanolotsaina ara-dalànan'i Laisenia Qarase, Praiminisitra naongana tamin'ny volana desambra 2006 izay nahatongavan'ny lehiben'ny etamazaoron'ny tafika Frank Bainimarama teo amin'ny fitondrana.
Lasa manana anjara asa lehibe eo amin'ny famoaham-baovao any Fiji ny bolongana hatramin'ny faha-10 Avrily, fotoana nampiatoan'ny filoha ny Lalampanorenana sy nanendrena ny Lehiben'ny etamazaoron'ny tafika Atoa Frank Bainimarama hitantana ny governemanta mandritra ny dimy taona . Taorian'izay moa dia namoaka ny fepetran'ny tany latsaka an-katerena ny governemanta ka nametraka fifehezana ny ny haino aman-jery  (ankoatra ny lohahevitra hafa). Mandrara ny gazety sy ny haino aman-jery ny lalàna, izay nampiana 30 andro tamin'ny 10 mey ny fampiharana azy, tsy hamoaka vaovao “mety hanakorontana.” Navoakan'ny governemanta ireny fepetra ireny hametrahana ny sivana any amin'ireo sampana fampahalalam-baovao isan-karazany any. Terena hikatona amin'ny enina ora hariva ihany koa ny cybercafés.
Jereo ny pejy manokan'ny Global Voices special momba ny Fanambin-dalàm-panorenana any Fiji .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/05/22/2360/
 mandritra ny dimy taona: https://globalvoicesonline.org/2009/04/13/fiji-president-gives-former-pm-new-five-year-mandate/
 nametraka fifehezana ny ny haino aman-jery: https://globalvoicesonline.org/2009/05/11/fiji-bloggers-debate-media-censorship/
 Fanambin-dalàm-panorenana any Fiji: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/fiji-constitutional-challenge-2009/
 Michael Hartsell: https://globalvoicesonline.org/author/michael-hartsell/